Ciidamada dowladda oo la wareegay degaano dhowr ah | Banaadir Times
HomeUncategorisedCiidamada dowladda oo la wareegay degaano dhowr ah
Ciidamada Xoogga Dalka Guutada 15-aad ee Qaybta 21-aad ayaa howlgal balaaran saakay ka sameeyay degaano hoostaga Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, halkaas oo mararka qaarkood ay tegi jireen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Howlgalka ayaa Ciidamada waxaa ay sigaar ah uga sameeyeen degaannada Deegaanada Sinadhaqo iyo labi-dulle oo dhinaca koonfureed kaga beegan Magaalada Dhuusamareeb, iyaga oo la sheegay inay la wareegeen degaanadaas.
Taliye xigeenka Guutada 15-aad G/le. Xirsi Cali Quuri ayaa sheegay in ciidamada ay la wareegeen labada degaan, isla markaana amaankooda ay siwyen u xaqiijiyeen.
Waxaa uu sheegay in degaannada Sinadhaqo iyo labi-dulle ay mararka qaar tegi jireen Xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana uu sheegay inay baaritaano ka sameeyeen Xaafadaha iyo goobihii fariisimaha u ahaa Al-Shabaab.
Previous articleGuddoomiyaha Aqalka Sare & Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi oo qaadacay shirka Dhuusamareeb
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo